Realme 3 waxaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa Maarso 4 | Androidsis
Realme 3 ayaa muddo ku jirtay xanta. Taleefanka ayaa la filayay inuu noqdo rasmi ah rubuca hore ee sanadka oo leh 48 MP sensor, oo sidaas ayay ahaan doontaa. Maanta, shirkaddu waxay xaqiijisay, iyada oo loo marayo tweet, taas waxay bilaabi doontaa taleefanka casriga ah ee Realme 3 bisha Maarso ee soo socota.
Boodhadhka bilawga ah ee hoos ka muuqda, ee ay soo dhejisay Realme, waxaa ku jira qaab xiddig leh. Sawir la dusiyey oo ah taleefanka casriga ah ee Realme 3 oo dhowaan soo muuqday ayaa xaqiijiyay taas Waxaa lagu qalabeeyay qaab xiddig leh daboolka dambe. Isku soo wada duuboo labada naqshadoodba waa cajiib.
Boodhka ayaa xaqiijinaya taas Realme 3 waxaa la siideyn doonaa 12:30 PM ee Hindiya bisha Maarso 4. Inta badan tilmaamaha Realme 3 hadda waa la daboolayaa. Si kastaba ha ahaatee, agaasimaha guud ee Realme Madhav Sheth ayaa xaqiijiyay in ay kaxayn doonto Helio P70 waxaa qoray Mediatek.
Sawirka dhabta ah ee Realme 3 ayaa soo daatay
Xanta ayaa sheegeysa in taleefanka lagu qalabeyn karo a Shaashad 6,3-inji ah oo bixin doonta qaraar FullHD + ah. SoC ee taleefanka waxaa lagu taageeri karaa 4GB oo RAM ah. Gadaashiisa waxaa ku qalabeysan kamarad laba -geesood ah. Waxaa la sheegay inay ku jiri karto 48 ama 16 MP megapixel sensor primary iyo 5 megapixel sensor second. Qaybta dambe ee taleefoonka waxay leedahay scanner fingerprint. Waxay ku shaqeyn kartaa batari 4,000mAh. (Ogow: Realme ayaa furi doonta dukaankeedii ugu horreeyay ee jireed sannadkan)
Maalin ka dib markii Realme 3 lagu dhawaaqo, Oppo ayaa bilaabi doonta F11 Pro gudaha Hindiya. Kaliya faahfaahin yar oo ku saabsan faahfaahinta F11 Pro ayaa soo baxay ilaa hadda. Waxaa jira warar badan oo la isla dhexmarayo oo sheegaya inay ku shaqayn karto chipset cusub oo MediaTek ah, kaas oo waliba noqon kara Helio P70. SoC waxaa lagu qalabeyn karaa 6 GB oo RAM ah iyo kaydinta gudaha ee 128 GB.
Oppo ayaa xaqiijisay taas F11 Pro wuxuu leeyahay muuqaal 6.5-inji ah oo aan muuqaal lahayn oo leh 32 megapixel kamarad iska-soo-bax ah. Qeybta dambe ee taleefanka waxaa ka muuqda kamarad laba geesood ah oo toosan oo leh 48-megapixel sensor. Taleefanka gacanta ayaa la filayaa inuu ku taageero VOOC inuu si dhakhso ah ugu dallaco USB-C. Waxaa lagu heli doonaa laba midab: Thunder Black iyo Aurora Green.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme 3 waxaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa 4-ta Maarso